သီချင်းတွေအတူတွဲဆိုခဲ့ပြီး ရိုးသားကာ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ သူငယ်ချင်းမီးမီးခဲအတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်ဝမ်းနည်းနေတဲ့ Rဇာနည် - TGI Daily News
အဆိုတော် Rဇာနည်ကတော့ အနုပညာအလုပ်တွေကို အချိန်အတော်ကြာလုပ်ကိုင်လျက်ရှိနေပြီး အောင်မြင်တဲ့အနုပညာရှင်တစ်ယောက်အဖြစ် ရပ်တည်ထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။သီချင်းကောင်းလေးတွေများစွာနဲ့ ပရိသတ်တွေရဲ့ ရင်ထဲကို ဝင်ရောက်နေရာယူထားနိုင်ခဲ့တဲ့ အဆိုတော်မီးမီးခဲဟာ မနေ့က ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။Rဇာနည်ကတော့ ယခုမှာ သီချင်းတွေများစွာအတူတွဲဆိုခဲ့ပြီး ရိုးသားကာ ချစ်စရာကောင်းတဲ့သူငယ်ချင်းမီးမီးခဲအတွက် စိတ်မကောင်းဖြစ်ကာ ဝမ်းနည်းနေခဲ့ပါတယ်။
မီးမီခဲဆုံးပါးသွားတဲ့ သတင်းဟာ ပရိသတ်တွေကိုရော အနုပညာရှင်တွေကိုပါ စိတ်မကောင်းဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ Rဇာနည်ကတော့ ” R.I.P မီးမီးခဲအလုပ်တွေအများကြီးအတူတွဲလုပ်ခဲဖူးတယ်ခရီးတွေအစုံသွားခဲ့ကြဖူးတယ်အမှတ်တရတွေအများကြီးရှိကြတယ်ရိုးသားပြီးချစ်စရာကောင်းတဲ့သူငယ်ချင်းရေကောင်းကင်ဘုံမှာ အေးချမ်းပါစေမတွေ့တာကြာပြီးပြန်တွေ့တာတစ်နှစ်အတိပဲ ” ဆိုပြီး လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာထက်မှာ ရေးသားထားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
Rဇာနည်ကတော့ ” ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဒီလိုအချိန်တွေ့ကြတယ်သီချင်းတွေဆိုကြတယ် အမှတ်တရပါပဲအလုပ်လုပ်နေရင်းသတင်းတွေတက်လာတယ်တို့ဘဝတွေကဒီလိုပါပဲ …..မိသားစုနဲ့ထပ်တူဝမ်းနဲစွာဖြင့်. ” ဆိုပြီး လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာထက်မှာ ရေးသားထားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ချစ်ပရိသတ်တွေအတွက် Rဇာနည်နဲ့ မီးမီးခဲတို့သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ရဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေကိုပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ပြီး အဆိုပါပုံရိပ်လေးတွေကို အောက်မှာကြည့်နိုင်ပါတယ်။
SOURCE : ZARNI MYO NYUNT
မီးမီခဲဆုံးပါးသှားတဲ့ သတငျးဟာ ပရိသတျတှကေိုရော အနုပညာရှငျတှကေိုပါ စိတျမကောငျးဖွဈစခေဲ့ပါတယျ။ Rဇာနညျကတော့ ” R.I.P မီးမီးခဲအလုပျတှအေမြားကွီးအတူတှဲလုပျခဲဖူးတယျခရီးတှအေစုံသှားခဲ့ကွဖူးတယျအမှတျတရတှအေမြားကွီးရှိကွတယျရိုးသားပွီးခဈြစရာကောငျးတဲ့သူငယျခငျြးရကေောငျးကငျဘုံမှာ အေးခမျြးပါစမေတှတေ့ာကွာပွီးပွနျတှတေ့ာတဈနှဈအတိပဲ ” ဆိုပွီး လူမှုကှနျယကျစာမကျြနှာထကျမှာ ရေးသားထားခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ။
Rဇာနညျကတော့ ” ပွီးခဲ့တဲ့နှဈဒီလိုအခြိနျတှကွေ့တယျသီခငျြးတှဆေိုကွတယျ အမှတျတရပါပဲအလုပျလုပျနရေငျးသတငျးတှတေကျလာတယျတို့ဘဝတှကေဒီလိုပါပဲ …..မိသားစုနဲ့ထပျတူဝမျးနဲစှာဖွငျ့. ” ဆိုပွီး လူမှုကှနျယကျစာမကျြနှာထကျမှာ ရေးသားထားခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ။ ခဈြပရိသတျတှအေတှကျ Rဇာနညျနဲ့ မီးမီးခဲတို့သူငယျခငျြးနှဈယောကျရဲ့ ပုံရိပျလေးတှကေိုပွနျလညျဖျောပွပေးလိုကျပွီး အဆိုပါပုံရိပျလေးတှကေို အောကျမှာကွညျ့နိုငျပါတယျ။